नन्दिता के सीसँग लेखनाथ गौतमको ग्लामर टल्क
by Krishna KC | Updated: 10 May 2017
- अमेरिका कहिले देखि हुनुहुन्छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ ?
- यस्तो लोकप्रिय मान्छे, देशलाई चाहिने मान्छे किन विदेश आउनु भएको त ?
- कला र संस्कृतिको कुरा गर्नु भयो, अहिले नेपाली ग्ल्यामर दुनियाँ कति संस्कृत छ, कति विकृत छ ?
- तपाईंलाइ किन त्यस्तो लागेको होला ?